EHANG 184: MAGACA KOOWAAD EE QIIMAYNTA DIIWAANGALINTAAGA Meeshaad rabto - Afrikhepri Fondation
Arbaco, Sebtember 23, 2020
Welcome BARNAAMIJKA IYO MYSTIA
EHANG 184: GOOBAHA DHAQAALINTA KA BEDDELIDDA GAADIIDKA AAD KA BEDELAY
Diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ee geyn doonta ayaa awood u yeelan doonta inay kuu gudbiso meel kasta oo aad rabto. Sida fudud sida toy, Ehang 184 drone-ka oo ay soo saartay Shiinaha ayaa awood u leh inuu ku qaado nin walba meeshii uu doono. Kaliya gali cinwaanka halkaad u socotid, si deggan u degso oo naftaada ha kuu qaado yaabkan yaabka leh ee si ammaan ah kuugu soo dhaca. Khayaali ayaa u rumeeyay soo saaraha diyaaradaha Shiinaha ee Ehang. Magaalada Las Vegas, waxaa lagu soo bandhigay Showga Qufulka Macaamiisha ee loo yaqaan 'Ehang 184 drone', kaas oo sida ku xusan naqshadeeyuhu uu awood u leeyahay inuu qaado nin ka yar 100kg 23 daqiiqo ugu badnaan.
Sikastaba, xeerarka ay dejiyeen hayadaha dowlada ee mas'uulka ka ah xakameynta taraafikada ayaan ku farxi doonin imaatinka suuqa diyaaradahaan. Qaabkan safarka ayaa hada sharci darro ah, laakiin nashqadeeyaha ayaa sheeganaya in "ay ku dadaaleyso in ay la shaqeyso mas'uuliyiinta, adduunka oo dhan". Mashruucan ayaa suuq geyn doona sanadka 2016 waxaana ku bixi doona ku dhawaad ​​250 euro. Intaa waxaa dheer, nidaam ka-hortagga shilalka ayaa si otomaatig ah loo adeegsan doonaa, baabuurkan duulaya ayaa sidaa darteed aad u amaan ah. Shirkad waardiye ayaa la heli doonaa 000-ka saacadood ee maalinta, 24 maalmood usbuucii si ay uga jawaabaan xaaladaha degdegga ah.
Magaalooyinka ay gaadiidku ku badan yihiin, mashiinkan wuxuu calaamad u noqon doonaa kacaanka gaadiidka shakhsiyeed. Maamulaha guud ee Ehang Huazhi Hu ayaa yiri "sameynta safarka hawada dhakhso, fududeyn iyo ka sahlan ayaa ah hadafkeyga ugu weyn nolosha" oo si daacad ah u aaminsan in EHang ay saameyn caalami ah ku yeelan doonto warshadaha, wixii ka dambeeya qaybta gaadiidka shakhsi ahaaneed. ”
Wax badan ka baro: http://voyage.gentside.com/drone/le-drone-ehang-184-le-premier-vehicule-volant-autonome-electrique-a-usage-personnel_art2864.html
Copyright © Gentside Travel
Daawo Dagaalka ugu Wanaagsan (2000)
Safarka bilowga ah - Matthieu Grobli
Christiane Taubira waxay raadineysaa magdhow waaxyada dibada ee Faransiiska, dhibanayaashii ugu horreeyay ee addoonsiga